अनलाइन स्टोरहरूमा Semalt SEO को प्रभाव के हो?
एसईओ, जो खोज इञ्जिन अनुकूलनको अवधारणाको लागि एक संक्षिप्त रूप हो, र यसको अर्थ भनेको प्रक्रियाहरू जुन तपाईंको साइटको र्यान्फिगर गर्न र सुधार गर्नको लागि हो। SEO ले तपाइँको अनलाइन स्टोरलाई खोजी ईन्जिनहरूमा दर्ता गर्दछ। गुगल खोजी भुक्तान गरिएको विज्ञापनको प्रयोग बिना नै एक निःशुल्क र प्राकृतिक तरीका हो। र परिणामको शीर्षमा साइटको श्रेणीकरणमा तपाईंको अधिक भूमिका, यसका विभिन्न पृष्ठहरूमा थप भ्रमणहरू र अधिक व्यवसाय। अनलाइन स्टोरहरूको लागि SEO नियमित साइटहरूको SEO नियन्त्रण भन्दा फरक मानिन्छ। किनभने यसलाई नियमित साइटहरू भन्दा सेट गर्न धेरै सरल छ। त्यसोभए यस लेखको उद्देश्य भनेको अनलाइन स्टोरहरूमा एसईओको प्रभाव स्पष्ट पार्नु हो। तपाईले आफ्नो स्टोरको एसइओलाई ध्यानमा राख्नु पर्ने कारकहरू पनि पत्ता लगाउनुहुनेछ।
पसलको SEO के हो?
अनलाईन एसईओ तपाईंको अनलाइन स्टोर र प्रस्ताव गरिएको सामानहरूको प्राकृतिक र नि: शुल्क मार्केटिंग हो। निर्भरताको एक ठूलो सम्झौता वस्तुहरूमा आफैमा निर्भर गर्दछ विभिन्न पक्षहरूबाट खोज इञ्जिनहरू सिर्जना गर्न, सुरू गरेर:
विवरण र सुविधाहरू
अनलाइन स्टोरको एसईओ ई-मार्केटिंगका लागि प्रयोग हुने एक महत्त्वपूर्ण र सबल विधिहरू हुन्। यो विधिले लाभ र इलेक्ट्रोनिक स्टोरहरू स्थापना गर्ने र लक्षित समूहबाट सबैभन्दा ठूलो आगन्तुक आधारमा पुग्ने इच्छाको सफलताको लागि मार्ग खोल्छ। यो समूह, जनसांख्यिकीयको साथ जुन प्रस्तावमा उत्पादनहरूसँग मिल्दोजुल्दो छ, आगन्तुकहरूको प्रकारले बनेको छ जुन तपाईको सामानहरू खोज्दैछ र पहिले नै देखाइएको छ कि खोज्दैछ, यसले तपाईंलाई सजिलैसँग पुग्न अनुमति दिँदछ, र सुधार गर्ने कार्यमा कार्य गर्दछ। तपाइँको अनलाइन शपको खोज ईन्जिनहरू।
हामी हाम्रो शीर्षकमा पुग्नु भन्दा पहिले हामीले इलेक्ट्रोनिक स्टोरको अर्थ र यसको परिभाषा बुझ्नुपर्दछ।
इलेक्ट्रोनिक स्टोरहरू के हुन्?
इलेक्ट्रोनिक स्टोरहरू बेच्न र बिभिन्न उत्पादनहरू र वस्तुहरूको खरीदको लागि व्यावासायिक प्लेटफार्म हुन्। यो विशेषज्ञता स्टोर को गुणवत्ता सामान्य जाँच गरी निर्धारित गरीन्छ। यो पनि सम्भव छ कि वाणिज्य मञ्चले सेवाहरू प्रदान गर्दछ र इन्टरनेटमा सामानहरू होइन। इलेक्ट्रोनिक स्टोरहरूको प्रयोग व्यापक र द्रुत रूपमा फैलिएको छ र यो विश्वव्यापी उपभोक्ताहरूको जीवनमा खरीदको लागि अपरिहार्य साधन भएको छ। अनलाइन स्टोरमा आधारभूतहरू छन् जुन पूरा गर्नुपर्दछ; जुन प्राय: इलेक्ट्रोनिक स्टोरहरू जित्ने सबैभन्दा ठूलो कारणहरू प्रतिनिधित्व गर्दछ।
उत्पादको लागि भुक्तान गरिएको मूल्य कसरी पुन: प्राप्ति गर्ने
शिपिंग र प्राप्त विधि
माथि उल्लेखित कारकहरूसँग कडा पालनको साथसाथ, योग्य एसईओ सीपहरू हुनु पनि महत्त्वपूर्ण छ। तर तपाईंलाई यो सीप सिक्न समय चाहिन्छ। यो समय तपाईंको गतिविधि र तपाईंले नियमित रूपमा राख्नु भएको प्रयासको आधारमा निर्धारित गरिन्छ। एसईओ को लागी तपाइँको साइट को लागी बनाईएको प्रयास तपाइँ उपयोग गर्नु भएको हरेक मिनेट लायक छ।
जे होस्, तपाइँ तपाइँको साइट को लागी एक को लागी सुम्पन सक्नुहुन्छ SEO एजेंसी ; जस्तै Semalt। यसले तपाइँको समय बचत गर्दछ, र तपाइँसँग हुनेछ छोटो समयमा उत्तम परिणामहरू। द्वारा प्रदान गरिएको सेवालाई धन्यवाद Semalt विशेषज्ञहरु यो सम्भव छ।
खोजी ईन्जिनहरूका लागि तपाईंको स्टोर कसरी कन्फिगर गर्ने भन्ने चरणहरू थाहा पाउनुभन्दा पहिले तपाईंले दुई मुख्य कारकहरूको साथ तपाईंको योजनालाई समर्थन गर्नुपर्नेछ। यी कारकहरू SEO को संसारमा लिने प्रत्येक चरणको आधार हुन् र जसमा e-store को लागी सबै मार्केटिंग कारकहरु निर्भर छन्:
गुगल खोजी ईन्जिनमा तपाईंको स्टोरको हालको रैंकिंग
खोजीहरूमा अप र डाउनहरू ट्र्याक गर्न तपाईंले आफ्नो हालको अनलाईन स्टोरको श्रेणीकरण थाहा पाउनुपर्दछ। त्यहाँ धेरै सेवाहरू छन् जसमार्फत Google र अन्य खोजी इञ्जिनहरूमा साइटहरूको स्तर निर्धारण गर्न सम्भव छ। त्यहाँ निःशुल्क उपकरणहरू छन् जुन धेरै मामलाहरूमा भुक्तान गरिएको भन्दा राम्रो मान्न सकिन्छ र्यान्क चेकर, SeoBook जुन यसलाई निःशुल्क प्रदान गर्दछ। सामान्यतया, भुक्तान गरिएका सेवाहरूले परिणामहरू सुन्दर र आकर्षक रूपमा प्रदर्शन गर्छन्। तर एकै साथ, अनुगमन गर्न सकिने कुञ्जी शब्दहरूको संख्या, डोमेनहरूको संख्या, इत्यादिमा पनि सीमितता छ, जबकि खोजी इन्जिनहरूमा तपाईंको साइटको पृष्ठहरूको श्रेणीकरण पत्ता लगाउन एक उपकरण प्रयोग गर्दैछ। धेरै महत्वपूर्ण। किनभने यसको माध्यमबाट, तपाईं एक साइटको विश्लेषण र कुञ्जी शब्दको विश्लेषण गर्न सक्नुहुन्छ; जब तपाई Google एनालाइटिक्स तथ्या .्क मा अचानक परिवर्तन देख्नुहुन्छ। यस तरीकाले तपाईले अवस्थालाई चाँडो सुधार गर्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईलाई गुगलले सजाय दिईएको छ, उदाहरणका लागि।
खोजशब्दहरू अन्वेषकहरूले प्रयोग गरेका
कुञ्जी शब्द छनोट शब्द र अभिव्यक्तिहरू छनौट गर्नको लागि सीमित छैन जुन भारी खोजी गरिन्छ, वा भवन लि links्कहरू, वा विशेष कुञ्जी शब्दको लागि उन्नत श्रेणीकरणको लागि खोजी गर्दै। तर यो त्यो भन्दा अधिक व्यापक छ र कुनै पनि सफल एसईओ अभियानको आधार हो।
Million० लाख खोजमा अह्रेफ्स द्वारा गरिएको एक अध्ययनले पत्ता लगायो कि कुनै विशेष खोजशब्दको लागि खोजी परिणाममा पहिलो स्थानमा रहेको पृष्ठलाई एक हजार अन्य सम्बन्धित खोजशब्दहरूको लागि पहिलो दश स्थानहरूको लागि पनि स्थान दिइनेछ। यसको मतलब यो छ कि तपाइँको साइटको लागि एक कुञ्जीशब्द नियन्त्रण गर्न पर्याप्त छ, र यसको साथ एक हजार अन्य शब्दहरू नियन्त्रण गर्नुहोस्।
कसरी कुञ्जी शब्दहरू छनौट गर्ने
कारकहरू र चरणहरू बारे हामी ध्यान दिन सक्छौं:
ई-स्टोर मार्केटिंग कारकहरू र चरणहरू
मोबाइलको साथ अनलाइन स्टोर अनुकूलता
पृष्ठहरू विभाजन गर्नुहोस्
यो मध्यम हो जुन वस्तु खरिदकर्तालाई प्रस्तुत गरिन्छ, जहाँ तपाईं फरक बिन्दु र कोणबाट बिभिन्न छविहरू प्रदर्शन गर्न सक्नुहुन्छ। यो प्रदर्शित माल को लागी एक प्रचारक चाल मानिन्छ। यो पनि एक प्रतिनिधि तरीकामा उत्पादन प्रदर्शन गरेर वास्तविक जीवनमा कसरी उत्पादन प्रयोग गरिन्छ प्रयोगकर्तालाई प्रतिबिम्बित गर्न पर्छ। यदि उत्पादन सनग्लास हो भने, तब तपाईले यसमा घाम लगाउने व्यक्तिको साथ तस्वीर राख्नुहुनेछ र यथार्थताको केही थप्नुहोस् ताकि Google ले ग्राफिक सामग्रीलाई राम्रोसँग सराहना गर्छ र यसलाई उच्च गुणको रूपमा लिन्छ। त्यसो भए तपाईले खोज ईन्जिनमा उच्च श्रेणीकरण प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ साथ साथै स्टोरको एसइओलाई अझ राम्रो गर्ने अवसर, विशेष गरी दृश्य सामग्रीको खोजीमा।
तथ्या and्क र अध्ययनले संकेत गर्दछ कि मोबाइल फोनबाट गरिएको इलेक्ट्रोनिक खरीदहरू हाल धेरै नै छन्। यसको मतलव मोबाईलबाट गरिएको खरीदहरू कम्प्युटरबाट बनाइएको भन्दा बढी महत्त्वपूर्ण छन्। त्यसकारण अनलाईन स्टोर मोबाइल फोनका लागि उपयुक्त छ र यससँग सजिलो प्रयोग र ब्राउजि forको लागि विरोधाभासको रूपमा हुनु आवश्यक छ। यो नेभिगेसनको क्वालिटीसँग सन्तुष्ट भई पर्यटकलाई खरीद गर्न अनुमति दिनेछ।
विभाजित पृष्ठहरू क्रमशः एक अर्कासँग पृष्ठहरूको समूह लिंक गर्ने प्रक्रिया हो। यो वेब पृष्ठको माथि वा तल अवस्थित नम्बरहरूको साथ गरिन्छ। यस विधिलाई इलेक्ट्रोनिक स्टोरहरूले व्यापक रूपमा यसको आगन्तुकहरूलाई यसको विभिन्न उत्पादनहरू ब्राउज गर्न अनुमति दिन प्रयोग गरिन्छ।
तपाइँको साइट को लागी खोज इञ्जिनहरु मा राम्रो परिणाम प्राप्त गर्न को लागी समस्याहरु छन् कि तपाइँ विभाजित पृष्ठहरु को बारे मा जान्नु पर्छ। यी समस्याहरू हुन् जुन खोज ईन्जिनसँग द्वन्द्वमा छ। यो अन्ततः मूल्यांकनमा परिणाम दिन्छ, जसले कसरी खोजी ईन्जिनहरूले संग्रह गर्दछ र तपाईंको अनलाइन स्टोर पृष्ठ मूल्याate्कन गर्दछ। विभाजन को समस्याहरु दुई तरिकाहरूमा छन्:
प्रभाग को प्रयोग को अधिकतर मामिलाहरु मा, क्रमिक पृष्ठहरु को सामग्री को मामला मा लगभग समान छ। यी पृष्ठहरूको उही मेटा वर्णन र उही मेटा शीर्षक छ। त्यसकारण जब गुगल क्रलरले साइट जाँच गर्दछ, यसले समान सामग्रीको साथ ठूलो संख्यामा पृष्ठहरू फेला पार्नेछ। के रोबोटहरूले यसलाई बाईपास गर्न र यसलाई खोजी परिणाममा ढिला रैंकिंग दिन्छ।
गैर अनुक्रमणिका तब हुन्छ जब साइट नयाँ छ र विभाजित पृष्ठहरूको संख्या ठूलो छ। यस केसमा, खोज ईन्जिनहरूका क्रलर एक निश्चित गहिराईमा रोक्न सक्छन्, विभाजित पृष्ठहरूको संख्या 50० पृष्ठ हो भन्ने विश्वास गरेर। यद्यपि, यस्तो सम्भावना रहेको छ कि क्रोलरले निश्चित गहिराईमा अनुक्रमणिका रोक्दछ र यसलाई २ be हुन दिन्छ, जसले २ing अर्को पृष्ठ अनुक्रमणिका बिना नै गर्दछ।
अब हामी पृष्ठहरू विभाजन गर्दा सामना गर्न सक्ने समस्याहरूको बारेमा सचेत छौं। अब हामी खोज ईन्जिनमा अनलाइन स्टोरलाई असर नगरी कसरी विभाजन प्रयोग गर्ने हेरौं।
स्टोरलाई असर नगरी कसरी विभाजन प्रयोग गर्ने
तपाईको स्टोरलाई असर नगरी यहाँ विभाजनका लागि विचार गर्ने कारकहरू छन्:
"Rel=prev" कथन र निर्देशन "rel=next" को प्रयोग गरी विभाजित पृष्ठहरू लिंक गर्नुहोस्। जब खोजी ईन्जिनहरूले यसलाई पढ्दछन्, यसले जान्छ कि यी पृष्ठहरू नक्कल छैनन्। तर बरु यसले महसुस गर्नेछ कि यो एक विभाजित पृष्ठ हो।
"Rel=canonical" निर्देशन प्रयोग गर्दै। यो विधि केवल "सबै हेर्नुहोस्" बटन अवस्थित अवस्थामा मात्र प्रयोग हुन्छ। जब यो बटन थिच्दछ, सबै पृष्ठहरू प्रदर्शित हुनेछ र एउटा पृष्ठमा मर्ज हुनेछ।
प्लगइनहरू र सफ्टवेयर प्रयोग गर्दै। यदि तपाइँ वर्डप्रेस प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, तपाइँ योआस्ट प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, र यसले विभाजन प्रक्रिया र उपयुक्त निर्देशनहरू प्रदर्शन गर्दछ।
अनलाइन स्टोरहरूको लागि अन-पृष्ठ एसईओ सुधार कारकहरू
त्यहाँ आन्तरिक अन-पेज पक्षबाट एसईओ को लागी स्टोर तयार गर्न कारकहरू छन्, र यी कारकहरूमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्णहरू हुन्:
मुख्य शीर्षकले अरबी र अ in्ग्रेजीमा उत्पादको नाम समावेश गर्नुपर्दछ कुनै पनि भाषा मार्फत आगन्तुकहरू प्राप्त गर्न।
URL जुन अनलाइन स्टोरमा उत्पादन पृष्ठमा लिंक छ।
उत्पाद लिंकमा उत्पाद नाम समावेश हुनुपर्दछ।
यो कुञ्जी शब्द उत्पादनको वर्णनसँगै सुरु गर्नु राम्रो हुन्छ किनकि खोज इन्जिनहरूले विवरण क्षेत्रमा समावेश प्रत्येक शब्दलाई ध्यान दिएर लिन्छन्। तर तपाइँले जान्नुपर्दछ कि तपाइँसँग १ product० - १ 160० क्यारेक्टरको दायरामा यो उत्पादन के हो भनेर संक्षिप्त रूपमा वर्णन गर्न सक्नुहुन्छ।
छविमा Alt पाठ ट्याग प्रयोग गर्नुहोस्
यो ट्याग HTML ट्याग मध्ये एक हो जुन छविहरूको साथ प्रयोग गरिन्छ। यो एक सानो पप-अप विन्डो हो जुन तपाईंलाई यस चित्रको सामग्रीको शीर्षक बताउन देखा पर्दछ।
हेडिingsहरू अनलाइन स्टोरमा आईटमहरूको उपशीर्षक हुन्
खोजी ईन्जिनहरूको माध्यमबाट आगन्तुकहरू प्राप्त गर्न, तपाईंले कुञ्जी शब्द र उत्पादन नाम उपशीर्षक एच १, एच २ मा प्रयोग गर्नुपर्नेछ।
सामग्री पाठ सामग्री हो जुन अनलाइन स्टोरमा उत्पाद छविको साथ हुन्छ
छविहरूको अगाडि पाठहरू पहिले लोड गर्नुपर्नेछ। यसले निश्चित रूपमा बाउन्स रेटको संख्या लाई कम गर्दछ। यो निश्चित रूपमा गुगलको साथ तपाईंको पक्षमा छ किनकि प्रकृति द्वारा पाठहरू छिटो लोड हुँदैछन्। यदि छवि ढिलाइ भएको खण्डमा यसले आगन्तुकलाई विचलित गर्न मद्दत गर्दछ। त्यसोभए ऊ टेक्स्ट पढ्न सक्छ र थाँहा हुन सक्दैन।
कुञ्जी शब्दहरूको घनत्व
यस कारकले तपाइँको अनलाइन भण्डारको खोजी परिणाममा रैंकिंग बढाउन सक्छ र तपाइँलाई पहिलो पृष्ठको अगाडि धकेल्न सक्छ। यो प्रयोग गर्न सकिने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारकहरू मध्ये एक हो।
विचार गर्नुपर्ने केहि थप कारकहरू
साथै, यी सबै कारकहरूको साथसाथै, हामी यसमा उल्लेखित एक महत्त्वपूर्ण कारकहरूमध्ये एक थप्नेछौं, जुन:
ब्याकलिks्क: यसलाई प्राप्त गर्न, तपाईं केहि व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्न सक्नुहुनेछ जसले ब्लगको स्वामित्व पाउनुहुन्छ। तर यो राम्रो हुने थियो यदि यी व्यक्तिहरू सामाजिक मिडिया साइटहरूमा प्रभावकारी हुन् भने बढी छविमा आधारित हुन। किनभने तपाईलाई ब्याकलिks्क चाहिन्छ जसले तपाईको स्टोरलाई सकारात्मक तरीकाले प्रकट गर्दछ।
यसैले, हामीले एसईओको खोजी ईन्जिनहरूका लागि अनलाइन भण्डारहरू बनाउनमा प्रयोग गरिएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारकहरू उल्लेख गरेका छौं, र त्यहाँ उल्लेख नगरिएका अन्य धेरै कारकहरू छन्, र हामी यसलाई अर्को लेखमा विस्तृत रूपमा उल्लेख गर्नेछौं ताकि तपाईं अलमल्लमा पर्नुहुनेछैन। समयमा धेरै जानकारी।
जहाँसम्म तपाईं हाम्रो अनलाइन स्टोरको विकाससँग सम्बन्धित कुनै चिन्ताको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो विशेषज्ञहरु सावधान छन् र तपाइँलाई तपाइँको स्थितिको स्पष्ट र सटीक समाधान दिनेछ।